मध्यबिन्दु अनलाइनसुशासनका पक्षमा हाम्रो ख़बरदारी | गणतान्त्रिक मुलुकमा राजावादीहरुको जुलुस, को को जान्छन् जुलुसमा ?
काठमाडौं – वर्तमान नेकपा सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकिरहेका अवस्थामा पूर्वराजावादीहरुले पछिल्लो समय राजसंस्था पुनस्थापनाको माग गर्दै सडक तताउन थालेका छन् । उनीहरुले विगत एक महिनादेखि ‘राजा आउ देश बचाउ’ भन्दै देशका विभिन्न सहरमा जुलुस र र्याली निकालिरहेका हुन् । काठमाडौंमा गत मंसिर १५ गते जुलुस निकालेका उनीहरुले पुनः मंसिर २० गते पनि जुलुस निकाल्ने बताएका छन् ।
गत कार्तिक १७ गते रुपन्देहीको बुटबलबाट सुरु भएको उक्त राजावादीको जुलुस बिस्तारै देशका मुख्य शहरहरुमा पस्ने क्रममा धनगढी, सुर्खेत, डडेलधुरा, नेपालगञ्ज, पोखरा, हेटौडा, विराटनगर, जनकपुर हुँदै काठमाडौंसम्म आइपुगेको छ । राजावादीहरुको जुलुसलाई कट्टर राजावादीमात्र नभएर हालैमात्र राजसंस्था फर्काउने एजेन्डा मिसाएको राप्रपाका नेता तथा कार्यकर्ता पनि रहेका छन् ।
को को जान्छन् जुलुसमा ?
जुलुसमा शाही कालका मन्त्री, शाहीककालका अञ्चलाधीश तथा राजाको प्रत्यक्ष शासनमा विभिन्न ठाउँमा राजनीतिक नियुक्त पाएका र फाइदा लिएकाहरुको बाहुल्यता हुने गरेको छ।
नेपाली कांग्रेसका पुराना नेता विपिन कोइराला, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका पुराना तथा बयोवृद्ध नेता मोहन चन्द्र अधिकारी, पत्रकार आदित्यमान श्रेष्ठ, पूर्व अञ्चलाधीश मेहम्मुब साह लगायतका व्यक्तिहरु पनि राजावादीहरुको कार्यक्रममा जाने गरेका छन्।
मंसिर १५ गते काठमाडौमा गरिएको कार्यक्रम राष्ट्रिय शक्ति नेपालको नामबाट गरिएको थियो । जुन संस्थाको अध्यक्ष केशरबहादुर विष्ट हुन् । विष्ट यसअघि शाही कालमा मन्त्री भएका थिए। यसैगरी शिव सेना नेपालका अध्यक्ष अनिल बस्नेत तथा गोरक्ष राष्ट्रिय जानगरणका अध्यक्ष किशोर गुरुङ हुन् ।
शुक्रबार हेटौँडामा राप्रपा आफैले कार्यक्रम गर्ने भएको छ । यसैगरी मंसिर २० गते झापामा पनि राप्रपाले कार्यक्रम गर्न लागेको राप्रपाका नेताहरुले जनाएका छन् । कार्यक्रममा राजावादीहरुले हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्रको पक्षमा चर्को नारा लगाउने गरेका छन् । उनीहरुले राजा आउ देश बचाउ, हिन्दू राष्ट्र कायम गर जस्ता नारा लगाउने गरेका छन् ।